Serivisy - YiZheng Heavy Machines Co., Ltd.
Fanoloran-tena amin'ny serivisy:
Serivisy mialoha ny varotra: manome endrika volavola tetikasa, famolavolana drafitra, drafitra fampitaovana sahaza, arakaraka ny filanao manokana, ny famolavolana ary ny fanamboarana vokatra, ny fampiofanana ireo mpandraharaha teknika ho anao.
Serivisy an-tsena: miaraka aminao hamenoana ny fanekena ny fitaovana, hanampy amin'ny famolavolana ny drafitra fananganana sy ny fizotrany amin'ny antsipiriany.
Serivisy aorian'ny varotra: afaka manome torolàlana eny an-toerana ho an'ny fametrahana fitaovana, fanesorana ny deboka eo an-toerana ary fanofanana ireo mpandraharaha.
Fandrosoana maharitra sy maharitra
YiZheng Heavy Machinery Co., Ltd. dia manam-pahaizana amin'ny famokarana zezika biolojika sy fitaovana famokarana zezika mitambatra. Na aiza na aiza misy azy, ny orinasa dia manao ny "fanajana ny soatoavina sosialy ao an-toerana sy ny fomban-drazana" ho fitsipika voalohany.
Eo am-panatanterahana orinasa manerantany sy fikatsahana fitomboan'ny tombom-barotra, dia nametraka hatrany ny fiarovana ny tontolo iainana hatrany i Yizheng ary niara-niasa tamin'ny fampandrosoana maharitra ny toekarena manerantany.
Hitondra ny fiantrana hatramin'ny farany isika
Miaraka amin'ny fahatsapana andraikitra ara-tsosialy matanjaka, Yizheng dia mandray ny asa soa ho tanjona iray hafa amin'ny orinasa. Ny asan'ny fanomezana sekoly sy fanampiana ny mahantra dia mitantara ny tantaran'i Yizheng.
Nanomboka tamin'ny 2010, Yizheng dia nanolotra sekoly ho an'ny zaza maherin'ny 20 ao amin'ny vohitra roa ao Afrika, ankoatry ny fanomezana vola isan-taona hamelomana ny ankohonany.
Amin'ny ho avy, ny orinasanay dia manana ny fahatapahan-kevitra sy ny fahatokisan-tena, miaraka amin'ny foto-kevitra ara-tsiansa, miatrika ny nettle, miezaka ho amin'ny tsara indrindra, izahay miaraka am-pieritreretana serivisy, teknolojia tena tsara sy ny kalitaon'ny vokatra hitady win-win fiaraha-miasa.
Miarahaba anao rehetra izahay hitsidika eto mba hikarohanao fotoana bebe kokoa amin'ny fiaraha-miasa.